Mabasa - Motio
musha 9 Careers
Mabasa at Motio
Tiri kutsvaga tarenda rekujoinha timu yedu, kubva kune stellar software mainjiniya kune vanoshinga vatengesi! Tarisa uone nzvimbo dzedu dzakavhurika.
The Motio tsika nemagariro
At Motio, isu tinofarira hunyanzvi hwekuvandudza software uye tinobudirira pakugadzira mhinduro dzinovandudza hupenyu hwevatengi vedu munyika yeBI uye analytics.
Vhura Nzvimbo pa Motio
US Sales Executive Mutengi weMiti Java Mugadziri Kugadzirisa Software Injiniya Java Developer Yemukati Performance Kwayedza Injiniya Software Injiniya, Kumberi End
US Sales Executive - Shanda kubva Kumba
Motio ndiye mushambadzi mutungamiriri mukugadzira akakosha kugona kusimudzira analytic mapuratifomu. Isu tinoita kuti hupenyu huve nyore kune nyanzvi dzeBI dzinoshanda neBMM Cognos Analytics, Qlik, PowerBI, uye Tafura. Unobudirira here nekushanda kukambani inounza zvigadzirwa zvakaisvonaka? Kushanda nevanovandudza mumatanho ekutanga emazano, zvinodiwa nevatengi, uye kugona kwesoftware, kunoita kuti uve nechido? Tiri kutsvaga wepakati-pabasa Sales Executive kujoina kambani yedu iri kukura.
Iwe unenge uri mune yakanaka kambani. Unenge uchijoinha Motio's yenyika-kirasi yekutengesa timu, yakatsigirwa nekushambadzira, uye nyanzvi technical technical.
Motio anotenda musimba rerusununguko. Iyi Sales Executive chinzvimbo ibasa rakanakira munhu anoda kumhanyisa yavo yekutengesa macircuit uye ekuvhara madhiri. Iwe uri mutariri uye unozvidavirira pakubudirira kwako, uye iwe une shungu yekukura uye kudzidza zvakawanda kuti uve chikamu cheichi timu yekutengesa. Izvi zvinoreva kuti iwe une basa rekutsvaga nekutaurirana netarisiro, uye kugadzira nekushandura mibvunzo kuti ive inokwanisa kutengesa inotungamira. Iwe unoda kufona uye kutaura nevatengi kugadzirisa matambudziko avo uye kuendesa kukosha nekutengesa Motio zvigadzirwa.
Kuti ubudirire iwe unoziva iwe unofanirwa kuenda kupfuura maemail, uchiziva kusangana kwakananga kuburikidza nefoni kana musangano mapuratifomu ndiyo nzira yekudyidzana nevatengi vatengi uye kuvaka hukama.
Iwe wakanangana nekuvaka yakasimba yekutengesa pombi kuti uve nechokwadi chenguva dzese yekutengesa.
Shanda wakanangana nekutengesa pamwedzi uye nekota uye zviwanikwa zvemari.
Iwe unoziva zvekutengesa zvakakosha, uye uve nehurongwa munzvimbo yekuenderana nevatengi vako nemikana.
Ronga misangano nevatengi vatengi uye gadzirisa yekutengesa kutenderera kuti uvhare chibvumirano.
Ehe, iwe unonzwisisa kuti kushandisa CRM system ndiko kiyi kune yako nekambani kubudirira.
Tevera nevatengi varipo kuti vaone mikana yekuyambuka-kutengesa, izvo zvinouya zvakasikwa kwauri.
Iwe uri pamusoro pevatungamiriri uye unoshuvira kusvetuka pamitobvu inogadzirwa nemamwe madhipatimendi.
Iwe unoziva kutengesa kwakanyanya-maitiro uye wakaratidza kuti iwe unoziva kutengesa.
Iwe unoshingairira kuzvikurudzira uye unoziva kuronga rako basa uye kugara wakanangana nezvinangwa zvako, zvakanyanya kukosha mukati memazuva ekushanda-epamba mazuva edenda, nekupfuura.
Iwe unomhanya nekukurumidza, unogara uri parunhare, uye unofarira kuwedzera rako rekutengesa chiitiko.
Iwe unoziva kuvaka zvirevo uye mitengo yemitengo kuhwina madhiri.
Iwe une yakanaka track rekodhi yekuzadzisa KPI uye zvinangwa.
Iwe une Bachelor kana Master Degree.
Une makore maviri kana mashanu mumusika weB2B, kunyanya mukati meiyo software mutengesi nharaunda.
Chiitiko neakakwira-vhoriyamu yekutsvaga kuburikidza neemail kushambadzira uye kutonhora kufona.
Iwe unoziva neBusiness Intelligence & Analytics.
Iwe une ruzivo rwemaitiro emari, kushuma kwemari, uye dashboard.
Uchishandisa hunyanzvi hwekutaura uye hwekunyora kugona kutaura, unoziva kugonesa vanhu.
Iwe uri chivimbo uye unosimbisa wekutengesa maneja uyo akarongeka kwazvo uye anotungamira-zvinangwa.
Waratidza kugona kudzidza nekufunga nekukurumidza.
Tumira neemail kuti utangezve ku careers @motio.com ine musoro wenyaya unoti "US Sales Executive."
Motio, Inc. ndeye Dallas-based, yepasirese software kambani. At Motio, isu tinogadzira software mhinduro dzinogonesa iyo chaiyo uye yakavimbika bhizinesi analytics kuitisa zvinogoneka.
Kwemakumi maviri emakore apfuura, Motio yanga iri imba yevashandi ve software vanofarira zvehunyanzvi hwekuvandudza software. Basa redu panguva ino rakanangana nekuvaka mhinduro dzinovandudza hupenyu hwevatengi vedu. Isu hatingoitira izvi kurarama, tinoita izvi nekuti chishuwo chedu.
SaManeja wechigadzirwa pa Motio, iwe une basa rekuvaka zvigadzirwa zvinogonesa vatengi vedu kuti vawane kukosha kwakanyanya kubva kune avo mabhizinesi analytics investments.
Iwe unofanirwa kunzwisisa zvinodiwa nevatengi vedu, izvo analytics zvigadzirwa zvavanoshandisa, uye makwikwi. Iwe unofanirwa kushandura iyi nzwisiso muchiono chechigadzirwa icho chinoziviswa kune vese vakuru hutungamiriri uye zvikwata zvebudiriro. Pane zuva nezuva-zuva, iwe uchave nebasa rekutsanangudza chiyero chechigadzirwa, kudoma maficha, uye kushanda pamwe neboka rekusimudzira kuti ubudise mhando yepamusoro software.
Tsanangura uye uve neyako chigadzirwa chiratidzo
Iva nyanzvi mune yedu bhizinesi dura
Iva unoziva kwazvo muQlik, Tafura, Simba BI uye Kuronga Ongororo
Tsvagurudza misika iyi
Nzwisisa mashandisiro anoita vatengi zvigadzirwa izvi uye nezvinetso zvavanosangana nazvo
Dzidza uye uite ongororo nezve zvinokwikwidza zvigadzirwa
Nzwisisa zvinodiwa nevatengi vedu
Ita hukama hwakanaka hwekushanda ne Motio vatengi
Shandira semumiriri wevatengi kumisangano yevanobata
Ziva nzvimbo dzemikana
Nzwisisa mashandisiro anoita vatengi Motio zvinogadzirwa
Manage Chigadzirwa Backlog uye kukoshesa pamberi pekusimudzira timu
Rondedzero uye isa pekutanga maficha
Chengetedza uye sarudza zvikanganiso
Ronga uye uite misangano yevanobata nguva nenguva yekuongorora zvakasarira
Iva inyaya yemusoro wenyanzvi yeboka rekuvandudza
Shandira pamwe nekutaurirana chiono kune vanogadzira
Enda kumisangano yezuva nezuva
Ongorora uye ongorora mitsva yechigadzirwa mikana
Ipa zvirevo zvitsva zvekuwedzera zvigadzirwa zvedu
Shanda pamwe nehutungamiriri hwepamusoro uchipa chinzvimbo, chirongwa chekuita uye kurudziro
4-gore degree mune analytics, sainzi yemakomputa, mainjiniya, mari, masvomhu, kana yakafanana yakafanana huwandu hwenzvimbo.
3+ makore eakafanira ruzivo muchigadzirwa kana manejimendi manejimendi
3+ makore eBusiness Intelligence uye / kana dhatabhesi / chiitiko chekuongorora
Unyanzvi hwezvinyorwa (kuongorora kwevabati, zvirongwa zvepurojekiti, mamiriro ekuzivisa)
Chiitiko chekushanda pamwe neAgile Development Team
Ruzivo rwakasimba uye chiitiko chinoshanda nehurongwa hwebhizinesi, modhi yebhizinesi, zano rehunyanzvi, uye roadkuronga mepu uye kuongorora mamiriro
Chiitiko chekushanda pamwe nemuchinjikwa-anoshanda zvikwata: Injiniya, Kutengesa, uye Kushambadzira
Yakakwirira yekutaura, yakanyorwa uye yekudyidzana hunyanzvi hwekutaurirana nevose vehunyanzvi uye vasiri-technical vateereri
Kugona kubata akawanda akakosha ane hukama nemapurojekiti mazhinji kamwechete
Inofanirwa kuve nehunyanzvi hunyanzvi:
Inofanirwa kuve neruzivo muQlik, Tafura, Simba BI uye / kana Kuronga Analytics / TM1
Sarudza hunyanzvi hwekukodha (SQL, kunyora, nezvimwewo)
Quarterly purofiti yekugovana mabhonasi
Hutano, mazino, chiratidzo, uye inishuwarenzi yehupenyu
401K ine 100% mechi kusvika 4%
Mazuva gumi nemashanu PTO yegore (pamubhadharo nguva yekuwedzera)
9 akabhadhara zororo rekambani
Tumira neemail kuti utangezve ku careers @motio.com nemusoro wenyaya unoti "Chigadzirwa Maneja."
Motio, Inc ndeye Dallas-based, yepasirese software kambani uye IBM Premier Bhizinesi Partner. At Motio, isu tinogadzira mapurogiramu esoftware anogonesa iwo chaiwo uye akavimbika mashandiro eBusiness Intelligence. Isu tinotungamira vanhu kuti vashande zvine hungwaru muBM Cognos.
Kwemakore makumi maviri apfuura, Motio yanga iri imba yevashandi ve software vanofarira zvehunyanzvi hwekuvandudza software. Basa redu panguva ino rakanangana nekuvaka mhinduro dzinovandudza hupenyu hwevatengi vedu. Isu hatingoitira izvi kurarama, tinoita izvi nekuti chishuwo chedu.
Zvikwata zvedu zvineshuwa nezveunyanzvi hwe software software, uye isu tine nyanzvi yekuvandudza tsika. Isu tinopa mukana wakanaka wevachangobva Computer Science vakapedza kudzidza uye vechidiki vagadziri vari kutsvaga kushanda munzvimbo diki inoshamwaridzika uye inotsigira.
Vadzidzi vachatarisirwa ku:
Shingairira mukugadzira uye kuita kune zvese zvigadzirwa zvedu uye zvetsika vatengi mhinduro.
Bata zvakananga nevatengi vedu kuunganidza zvinodiwa uye kunzwisisa zvavanoda.
Iva nechido uye shingairira pakubatsira vatengi vedu kugadzirisa matambudziko avo.
Shanda zvakanaka munzvimbo yakatenderedzwa nechikwata.
Unyanzvi hwakakosha uye ruzivo runodiwa:
An Undergraduate degree kana yakakwira muComputer Science kana inzvimbo yakabatana.
Iyo Yakazara GPA ye3.0 kana zvirinani
Kunzwisisa kwakanaka kweJava
Kunzwisisa kwakanaka kweiyo Object Yakatemerwa Dhizaini uye UML Notation.
Kunzwisisa kwakanaka kweRukama Dhatabhesi Dhata uye Dzidzira.
Unyanzvi hwekutaurirana kwakanaka.
Chido uye kugona kudzidza zvinhu zvitsva.
Tsika yakasimba yebasa.
Kuda kwehunyanzvi uye chishuwo chekugara uchigovana uye kukura nevamwe vedu vese timu
Unyanzvi hunodiwa, asi haudiwe:
Svosve / Gradle
Tumira neemail kuti utangezve ku careers @motio.com nemusoro wenyaya unoti "Mushambadzi weJava."
Kugadzirisa Software Injiniya
Iyo Maintenance Software Injiniya inopa yechipiri nhanho yehunyanzvi kukwira kwevatengi nyaya uye nekudaro inogona kuve nekukanganisa nekukasira kugutsikana kwevatengi nekugadzirisa zvinhu zvakaoma nekukurumidza uye nenzira kwayo. Iyi inzvimbo yekuronga yakatsaurirwa kupa post-kuburitsa software kugadzirisa uye kuremara kugadzirisa.
Ita yekuchengetedza kukodha uye kugadzirisa zvekare nzvimbo dzinonetsa pane iripo Motio mafomu ekuvandudza kunyatso, usability, uye kuita.
Kunyatsoita uye kunyatsoongorora uye kugadzirisa abroad rondedzero yezviputi zvekushandisa sezvo ivo vachiwedzera kubva kuRutsigiro Chikwata nekugadzirisa matambudziko ekupedzisira-mushandisi mashandisiro, kugadzira kodhi gadziriso, uye kunyora mhinduro uye mashandiro ekushandisa mune ramangwana.
Nehunyanzvi kutaurirana nevatengi kuburikidza neemail, foni, uye screen share kuunganidza ruzivo rwehunyanzvi runobatsira kuongorora zvinonetsa zvechigadzirwa.
Ipa mhinduro kune Chigadzirwa Injiniya maererano nezvakajairika zvirongwa zvehurongwa zvinoonekwa.
Kubudirira kutaurirana nezvimwe zvikamu zvesangano kana nyaya dzenyaya dzisina kujeka, shanda nekukurumidza kuti uwane chinokonzeresa chechinetso, wozogadzira nekugadzirisa mhinduro.
Ita mamwe mabasa ane chekuita nebasa nemitoro sezvingapiwe nguva nenguva.
BS degree muComputer Science, Computer Injiniya, kana Software Injiniya yakasarudzika kana yakaenzana tekinoroji ruzivo.
Makore mashoma emakore mashanu ezviitiko zvine chekuita nekusimudzira.
Kuziva kwemaitiro akanakisa uye nzira dzekubudirira kwehupenyu hupenyu hwekutenderera
Zvakajairika ruzivo kana ruzivo rwebhizimusi pfungwa / maitiro, ehukama dhatabhesi pfungwa, software dhizaini mazano, uye dhatabhesi modelling.
Kugona kuisa pamberi uye kubata akawanda mapurojekiti.
Kwakanaka kugona kugadzirisa hunyanzvi, uye hunyanzvi hwekuongorora.
Kwakanaka kutaurisa uye kwakanyorwa kutaurirana hunyanzvi nekwanisi yekunyatso kushanda pamwe nevatengi 'bhizinesi nyaya.
Unyanzvi munzvimbo dzinotevera:
Shell kunyora (Windows, Linux)
Tumira neemail kuti utangezve ku careers @motio.com ine musoro wenyaya unoti "Maintenance Software Injiniya."
Java Developer Yemukati
Motio, Inc ikambani yeDallas based Software iyo inopa zvigadzirwa uye mhinduro dzetsika dzeBusiness Intelligence Indasitiri. Zvikwata zvedu zvinofarira hunyanzvi hwe software software, uye isu tine nyanzvi yekuvandudza tsika.
Tora chikamu mukugadzira, kuita uye kuyedza maficha ezvedu zvigadzirwa zvakasiyana.
Unyanzvi hwakakosha uye ruzivo rwunodiwa:
Parizvino iri kushandira kupedzisa degree muComputer Science kana inzvimbo yakabatana.
Kunzwisisa kwekutanga kweJava / J2EE.
Kunzwisisa kwekutanga kweObject Yakatemerwa Dhizaini uye UML Notation.
Kunzwisisa kwekutanga kweRukama Dhatabhesi Dhata uye Dzidzira.
Unyanzvi hunyanzvi hwehunyanzvi, asi hazvidiwe:
Git / Kupandukira
Tumira neemail kuti utangezve ku careers @motio.com nemusoro wenyaya unoti "Java Developer Yemukati."
Performance Kwayedza Injiniya
Motio, Inc ikambani yepasirese software inovandudza software mhinduro dzinogonesa kuita kwakaringana uye kwakavimbika kweBusiness Intelligence kuita.
Iyo yekuyedza bvunzo mainjiniya inoitisa uye nekuita mhando yehuvimbiso maitiro ekuyedza kuita kwe Motio zvigadzirwa. Kushanda mukati meiyo agile maitiro akagadzwa nechikwata chekusimudzira, iyo yekuyedza bvunzo injinjini ichavandudza mashandiro ebvunzo zvinyorwa uchishandisa indasitiri akajairwa maturusi, kuuraya, kurekodha metric uye kuburitsa mishumo. Iyo yekuyedza bvunzo mainjiniya anozotaurirana nevamabhizimusi vanobatika nguva dzose, kufambira mberi uye bvunzo mishumo.
Shandira pamwe nevaridzi vechigadzirwa uye vanogadzira kuti vagadzire ekuedzwa kwekuita zvinodiwa uye maitiro ekugashira.
Dhizaina uye shandisa zvekare zvinoshandisika kuita bvunzo zvinyorwa zvichitevera zvakanakisa maitiro uchishandisa indasitiri akajairwa maturusi
Kuitisa sisitimu yekuyedza kuita kuti uve nechokwadi chekuvimbika kwesisitimu, kugona uye kugona
Wongorora mhedzisiro yemabvunzo uye gadzirisa nezvikwata zvekusimudzira kune chero zvigadziriso zvebug.
Unganidza metric uye gadzira bvunzo dzekutarisa manejimendi
Kazhinji kutaurirana bvunzo kufambira mberi, bvunzo mhedzisiro kune manejimendi
Shandira pamwe neBusiness / Yekushandisa zvikwata kuvandudza mashandiro ehurongwa
Bachelor's degree muComputer Science kana zvakaenzana
3+ makore ezviitiko mukuyedza kwekuita
Unyanzvi hwekugadzira Java
Ruzivo rweyedzo automation uye maturusi
Kwakanaka kuongorora uye kugadzirisa kugona kugona
Ruzivo rwakasimba uye kuda kwemaitiro ekukurumidza
Kuzvitangisa-wega nekwanisi kutora yakatemwa mafambiro uye kutyaira basa kupedzisa
Kugona kushanda zvakazvimiririra kana munzvimbo yechikwata
Unyanzvi hwekutaurirana hwakasimba pamwe nekuratidzira kugona kushanda nezvikwata
Chiitiko nezvikwata zvinoshandisa Scrum kana Kanban
Tumira neemail kuti utangezve ku careers @motio.com ine musoro wenyaya unoti "Performance Testing Engineer."
Software Injiniya, Kumberi End
Kure (United States) kana muhofisi yedu yePlano, Texas
Motio iri kutsvaga ane tarenda kumberi kwekupedzisira musimudziri kuti abatsire kugadzira inotevera chizvarwa webhu ruzivo rwemushandisi yekiyi Motio chigadzirwa. Iri basa nderewe kana iwe uine shungu nekutungamira dhizaini uye kumisikidza kwechinhu chitsva mushandisi ruzivo nehunyanzvi hwako izvo zvinoita kuti vatengi 'vararame hupenyu huve nyore nekusunungurwa kwega kwega.
Pamwe chete shanda pane inosimudzira timu yekusimudzira uye neinjiniya manejimendi dhizaini, kodhi, kubatanidza, kuyedza, uye kutsigira Angular-based web interfaces kune mabhizinesi ekushandisa uchishandisa akanakisa maitiro senge otomatiki kuyedza uye DevOps.
Gadzira zvinowanikwazve zvinhu uye ekumberi-kumagumo maraibhurari ayo anodya uye anoshanda paJSON-based API.
Govera zvakadzidziswa kuII / UX kukanganisa kwekuchinja kwekuvaka uye ruzivo rwevashandisi.
Shandisa hunyanzvi kurairidza dzimwe nhengo dzechikwata mumatekinoroji akakodzera kuwedzera kugona kwechikwata.
Gadzirisa matambudziko anokonzeresa kudzikira kwenguva kumusika, kunatsiridza mhando, kuwedzera kuchinjika, uye kuita kuti kodhi igare ichichengetedza ramangwana.
Flex maawa ekushanda mukubatana pamwe nechikwata zvinotungamira mukuwedzera kubatana pamwe nevagadziri mune dzimwe nguva nzvimbo (semuenzaniso Europe).
Bachelor of Science degree muComputer Science, Computer Injiniya, kana Software Injiniya kana yakaenzana tekinoroji ruzivo.
Makore maviri++ ruzivo neyakagadziriswa vhezheni uye inoburitsa masisitimu manejimendi seGitLab, GitHub, nezvimwe.
Yakaratidza maitiro emhando dzakanakisa maitiro uye nzira dzeanogonesa kukura ehupenyu.
Zvakajairika ruzivo kana ruzivo rwebhizimusi pfungwa / maitiro, software dhizaini mazano, uye database modelling.
GraphQL uye / kana REST APIs
Zvoga zviyero zvekuyedza senge Karma uye Protractor
Package manejimendi uye kuvaka maturusi senge npm, Maven, uye Gradle
Mapaipi maturusi akaita seJenkins uye Gradle
Kushandiswa kwemidziyo yeDocker
Kushanda pa Motio
Motio inopa inovandudza-inoshamwaridzika tsika uko kudzidza pamwe nekubatana zvinoitika zvezuva nezuva. Vashandi pasangano rose vanonakidzwa nerusununguko rwekushanda pamwe chete pamatanho ekugadzirisa matambudziko akaoma uye nekuvandudza hupenyu hwevatengi vedu hwezuva nezuva.
Motio inoramba iri kure kwenguva pfupi nekuda kwedenda. Vanokwikwidza vemuno vanogona kushanda munzvimbo yakasanganiswa kure uye pa - saiti kumisikidzwa patinodzokera kuhofisi vanosarudzwa, asi vavhoterwa vanotsvaga chinzvimbo chakazara vari vanokurudzirwa kunyorera.
Motio mukana wakaenzana mushandirwi uye anotarisa vese vanonyorera vasina hanya nerudzi, chitendero, ruvara, nyika mavambo, madzitateguru, zera, chimiro chemhuri uye chemhuri, hurema, hunhu hwepabonde kana hunhu, chinzvimbo chevagari vemo kana chero chimwe chikamu chakachengetedzwa nehurumende, federal kana mutemo wemuno.
Tumira neemail kuti utangezve ku careers @motio.com ine musoro wenyaya unoti "Software Injiniya, Kumberi Kuguma."
Nesarudzo, iwe unogona kusanganisira zvidzitiro zveveruzhinji zvinowanikwa zvevashandisi iwe zvawakabatsira kugadzira uye / kana kuita. Usasanganise ruzivo rwekuvanzika rwevamwe.